Accueil > Divers > Tsy leo ny fitaka nataon’i Hery Rajaonarimampianina azy
Tsy leo ny fitaka nataon’i Hery Rajaonarimampianina azy
Tao anatin’ny iray volana teo izay dia nandeha be ny resaka fa hisy indray ny fifampidinihina eto amin’ny firenena mahakasika ny raharaha pôlitika sy ny krizy mety hitranga mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018. Isan’ny malaza amin’izany ny fidirana an-tsehatra ataon’ny FFKM (Fiombonamben’ny fiangonana kristianina Malagasy) izay voalaza fa nisy fihaonana tamin’ny filohan’ny repoblika Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha andro vitsivitsy lasa izay.
Taorian’izany ary dia manambara ny mpanao pôlitika maro izay milaza fa mifandray amin’ny FFKM ireto fa hisy ny fiaraha-midinika indray tsy ho ela raha ny fanambaran’izy ireo. Hatrany amin’ny filazana fa hiverina toa ny teny amin’ny CCI Ivato toa ny tamin’ny taona 2014 nanaovana fihaonambem-pirenena iny ny roa tonta.
Eo anatrehan’izany dia misy mahasahy milaza ireto mpanao pôlitika ireto fa ho ravana ny andrim-panjakana sasantsasany ka hosoloana rafitra iray hiaraha-mitantana indray izany. Isan’ny voalaza amin’izany ny fandravana ny Antenimierampirenena ka hosoloina “assemblée constituante” izany indray hono. Voalaza koa fa ingahy Hery Rajaonarimampianina ihany no filoham-pirenena mandritra izany fiaraha-mitantana izany izay mety haharitra roa taona eo ho eo.
Voalaza hatramin’ny fanoloana an’ingahy Solonandrasana Olivier Mahafaly izay praiminisitra lehiben’ny governemanta ankehitriny. Governemanta iaraha-mitantana indray hono no hatsangana manomboka amin’ny volana janoary na febroary 2018 raha ny dinika ifanaovan’ny mpanao pôlitika.
Ankilan’izay indray dia niarahantsika nahita ny fandinihan’ny senatera sy ny depiote ny fivoriana mahakasika ny fanovana ny Lalàmpanorenana amin’izao fotoana izao tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo iny tetsy Anosikely. Toa izany koa ny mahakasika ny lalàmpifidianana ho amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny repoblika amin’ny taona 2018. Hisy ny fivoriana tsy ara-potoana manokana hataon’izy ireo tsy ho ela.
Izany indrindra no ilazana fa ho voafitaka indray ny FFKM amin’ity fitadiavam-bahaolana amin’ny fikatsahana hevitra hanatsarana ny fiainanan’ny Malagasy sy ny hialana amin’ny korontana arampiaraha-monina iainana hatramin’izao fotoana izao.
Ingahy Hery Rajaonarimampianina izay filoham-pirenena amperin’asa dia efa niara-nidinika tamin’ny FFKM sy ny hery velona rehetra ny taona 2014. Nolazaina tamin’izay fa hisy ny fiaraha-mitantana ho fanavotana ny firenena, ka isan’ny voalaza tamin’izany ny hijerena indray ny fanovana ny Lalàmpanorenana, ary ny fanarenana ifotony izay hita fa tsy nety hatramin’izay ary indrindra tamin’ny fotoanan’ny tetezamita iny.
Tsy noraharahian’ingahy Hery Rjaonarimampianina izany ka nangaihay teo ny FFKM izay niandraikitra ny fikarakarana sy ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana teo aloha rehetra namolavola izany.
Fitaka be vava no nahazo ny Malagasy2400 mahery manerana ny Nosy nandray anjara tamin’izany. Nangina tsy nahateny intsony ny FFKM taorian’izay ary tsy niresaka raharaham-pirenena intsony aza satria hita fa tena leo tanteraka. Nisy sonia nankalazaina be tamin’ireo filoha ireo sy ny FFKM tamin’izay fotoana izay nefa iny nandamoka iny ny fampiharana izany. Voalaza tamin’izay fotoana izay fa ingahy Hery Rajaonarimampianina no tsy nanatanteraka ny fifanarahana.
Ankehitriny ary dia mandeha ny resaka fa hiverina indray hono ny fifampidinihina pôlitika handravonana ny raharaham-pirenena, ka mbola ny FFKM ihany no hanao izany.
Mbola tsy leo ny fitaka sy ny fanalana baraka azy ihany angaha ry zareo ireto no mbola mitady izany vahaolana efa tsy eken’ny fialoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hatrany amboalohany izany? Ho hitantsika ny mety ho tohin’izany satria any indray no andehanan’ny sain’ny mpanara-baovao pôlitika rehetra ankehitriny.